မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: KIA လိုင်ဇာ သိမ်းပိုက်ရန် မြန်မာက တရုတ်သို့ ခွင့်တောင်း “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
Monday, 27 June 2011 20:55 KNG (ပေးပို့ သူ-ဗမာ့သွေး)
မြန်မာစစ်တပ်က ခေါ်ယူမေးမြန်း နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းနှင့် ပေါ်တာဆွဲမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ထွက်ပြေးလာရခြင်းဖြစ်သည်ဟု တိမ်းရှောင်လာသူများပြောသည်။Rest of your post
bermese sodier is like adog!
very very bad and aufully !
must have to going to hell early ..
they r only have adog ideas then how do cruel
group of the native peoples. htwi ......